Manangana sehatra serivisy ara-pitsaboana marani-tsaina
Miantehitra amin'ireo andrimpanjakana misy ifotony sy angona lehibe momba ny fitsaboana amin'ny Internet,
Miezaha manangana "hopitaly, dokotera, fianakaviana, olona tsirairay", "Olona, ​​fiainana" ho iray amin'ireo sehatr'asa serivisy ekolojika medikaly manan-tsaina.
Fampiroboroboana ny Medical Alliance Hierarchical diagnostika sy ny fitsaboana
Manararaotra ny tombony amin'ny fizarana ny angona sy ny angom-baovao eo anelanelan'ny ambony sy ambany Unicom, Manangana fikambanam-pitsaboana miaraka amina fikorianan-drakitra mavitrika ao an-tranon'ny "hopitaly dokotera" sy "marary dokotera", Ary ny fomba fitiliana hierarchika sy ny serivisy fitsaboana .
Mampihatra fanavaozana ara-pahasalamana sy fampandrosoana
Miaraka amin'ny fanohanan'ny Teknolojia mandroso any Shenzhen, Akademia Sinoa momba ny siansa Shenzhen Sekolin'ny fiankinan-doha amin'ny Harbin Institute of Technology sy tohana ara-teknika avy amin'ny Hopitaly Xuanwu ao amin'ny University Medical University, mampihatra ny fomba vaovao amin'ny fanavaozana ara-pitsaboana sy ny fampandrosoana, ary miezaka mafy kokoa- ho an'ny fahasalamam-pirenena.
Vahao ny sarambabem-bahoaka
Sarotra ny mahita dokotera. Lafo ny fananganana "pre hospital, amin'ny hospital and post hospital" amin'ny alàlan'ny fananganana sehatra fitantanana feno ho an'ny aretina mitaiza
Ny fizotry ny serivisy amin'ny tsingerim-piainana dia mitarika ny filentehan'ny loharanom-pahalalana avo lenta, Halaminay tanteraka ny olana fa sarotra amin'ny olon-tsotra ny mahita dokotera, nefa lafo ny mahita dokotera.